Tottenham 0-0 Manchester United - BBC Somali
Cayaaraha tartanka England Premier League ee shalay dhacay waxay ku soo wada gabagaboobeen barbaro ma jirto koox koox kale badisay si ka duwan inta badan kulamadii dhacay sabtidii.
Tottenham iyo Man U way kala badin waayeen, Sunderland iyo Newcastle barbarro ayay noqdeen. Liverpool iyo Everton way ismari waayeen. Birmingham iyo Aston Villa-na bareejo ayay ku dhamaatay.
Man U ayaa sii kordhisay rikoorka ay haysatay in aan marna laga badin intii tartankan uu socday. 21 cayaarood oo ay dheeshay dhamaantood hal guuldarona kalama kulmin.
Man U ayaa dhowr iyo tobankii daqiiqo ee u dambaysay ku cayaaraysay iyadoo hal cayaaryahan la dheer yahay kadib markii Cayaartoyda difaaca ee da'da yar Rafael Da Silva laga saaray cayaarta.
Tottenham kama faa'iidaysan halka cayaaroyd ee ay dheerayd kooxda Man U.
Labada koox midna gool ma dhalin, oo cayaartu waxay ku soo gabagabowday 0-0.
Manchester United afar cayaaryahan ayaa calaamadda digniinta ee jaalaha qaatay, waa Evra, Rafael oo jaalihii labaad cayaarta looga saaray, Fletcher iyo Rooney.
Dhinaca Tottenham Van der Vaart iyo Palacios ayaa calaamadda digniinta la siiyay.
Inkastoo hal hal dhibic ay labada koox kala hoydeen cayaartan, hadana Man U waxay hogaanka dib ugala wareegtay kooxda Man City, waxay labaduba leeyahay 45 dhibcood.
Hase yeeshee, goolal ayay ka horaysaa Man U, iyadoo waliba Man U 21 kulanna dheeshay, halka Man City ay laba cayaarood dheer tahay maadaama ay 23 kulan dheeshay.
Tottenham, ayaase sadexda dhibic ee ay ku guulaysan waysay waxay dhaxalsiisay in ay booskii afaraad ay ka soo ceshan wayso kooxda Chelsea oo shalay ka badisay Blackburn.
Tottenham, waxay leedahay 38 dhibcood, halka Chelsea ay leedahay 38, iyadoo shan dhibcood ka hoosaysa Arsenal oo kooxda sadexaad ka ah dhinaca dhibcaha. Kooxaha Man U iyo Man City oo mid walba 45 leedahay oo hogaanka haya waxay Chelsea ka sareeyaan 7 dhibcood.
Birminghan 1-1 Aston Villa
Cayaaraha kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ahaa; Kooxaha Birmingham iyo Aston Villa oo xafiiltan uu ka dhaxeeyo maadaama ay isku magaalo yihiin barbarro ayay noqdeen.
Waxay ku kala baxeen 1-1.
Labada goolba waxaa la dhaliyay qaybtii dambe ee cayaarta.
Birmingham oo marti loo ahaa ayaa goolka ku hormartay oo daqiiqadii 49-aad uuu dhaliyay cayaaryahankooda Roger Johnson oo dhinaca difaaca ka cayaara.
Hase yeeshee, dhowr iyo labaatan daqiiqo kadib daqiiqadii 73aad ayay Aston Villa u suurtagashay in cayaaryahankoooda isla difaaca ka cayaara James Collins uu goolka barbardhaca u dhaliyo.
Labadan koo oo liiska meel hoose kaga jira kana mid ah shanta koox ee ugu hoosaysa, ayaa natiijadu macnaheedu yahay in aysan wax badan u soo kordhin.
Birmingham oo booska 16-aad ku jirta waxay yeelatay 23, Aston Villa-na 22 oo hal dhibic oo kaliya ayay ka saraysaa. Hase yeeshee, Aston Villa waxay siman yihiin kooxda Wigan oo iyadu 22 leh ahna kooxda sadexaad marka hoos laga soo tiriyo, waxaa ka hooseeya oo kaliya West Ham oo 20 iyo Wolves oo leh 21 dhibcood.
Cayaarta kale ee kooxaha isku magaalada ah ee xiisaddu ka dhaxayso ay yeesheen waxay ahayd tan dhexmartay kooxaha Liverpool iyo Everton.
Liverpool oo xilliyadii ugu dambeeyay guuldarooyin isdaba joog ah ay soo wajaheen isla markaana aan ahayn Liverpool-tii looga bartay in ay ka mid ahaato kooxaha ugu sareeya England.
Liverpool waxay 4 gool kala dhaliyeen kooxda Everton. Hase yeeshee, midkoodna ma badin.
Goolasha waxaa ku hormaray Liverpool oo daqiiqadii 29-aad ee qaybta hore uu gool u dhaliyay Raul Meireles oo tababare Roy Hodgson uu kooxda dhowaan ku soo biiriyay kadib markii uu tababaraha ka noqday.
Qaybtii hore waxaa lagu kala nastay 1-0.
Markii la isugu soo laabtay qaybta labaad ayaase markiiba Everton ay dardar xoog leh la soo gashay. Cayaarta oo daqiiqad kaliya socota ayay gool heleen, oo natiijadu noqotay 1-1, waxaa u dhaliyay Sylvain Distin oo dhinaca difaaca ka cayaara. Hadana lix daqiiqo kadibba waa loo labeeyay Liverpool oo daqiiqadii 52-aad ayaa cayaaryahan Becckford uu u dhaliyay Everton gool labaad. Waxayna cayaartu ku dhamaatay 2-2.
Liverpool waxay ku qaaday in ay cayaarta dib ugu soo laabato oo ay soo guddo goolka lagu leeyahay rubuc saac markii daqiiqadii 68-aad uu goolka barbardhaca u dhaliyay cayaryahankooda Kuyt, waxaan auu ahaa rigoore loo dhigay.
Liverpool iyo Everton waa isku dhibco dhinaca liiska waxay ku kala horeeyaan goolasha koox walba u soo haraysa.
Everton ayaa ah kooxa 12-aad maadaama lagy leeyahay 2 gool halka Liverpool 4 gool looga leeyahay marka la kal ajaro goolasha ay dhaliyeen iyo kuwa laga dhaliyay.
Kooxaha Sunderland iyo Newcastle oo ka mid ah tobanka koox ee liiska qaybta sare kaga jira way kala adkaan waayeen iyaguna.
Waxaa goolka ku hormaray Newcastle oo cayaryahankooda Kevin Nolan oo qadka dhexe ka cayaara uu goolka u dhaliyay markii qaybtii labaad la isugu soo laabtay oo 7 daqiiqo ay socoto.
Goolkaas iyadoo ay ku hogaaminayso Newcastle, ayaa waqtiga dheeraadka ah ee lagu daray cayaarta kubad ka soo laabatay goolhayaha oo ku dhacday cayaaryahanka africa Asamoah Gyan ay shabaqa u dabamartay goolhayaha kooxda Newcastle Craig Gordon.
Waxay ku soo gabagabowday cayaartaasi 1-1.
Dhinaca dhibcaha Sunderland waxay ku jirtaa booska lixaad, oo 34 dhibcood ayay yeelanaysaa, halka kooxda ay kooxda sagaal tahay oo booskeedu waxba iskama badalin inkastoo dhibic u korodhay oo 29 ay yeelatay, Blackpool iyo Blackburn ayay hal dhibic ka saraysaa,